Charles Dickens. Dzimwe nyaya dzeKisimusi kunze kwaVa Scrooge | Zvazvino Zvinyorwa
Charles Dickens. Dzimwe nyaya dzeKisimusi kunze kwaVa Scrooge
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nyaya
Dickens akanyora nyaya shanu dzeKisimusi.
Ndiyo yakasarudzika yekare, anonyanya kuzivikanwa. Iyo inoverengwa uye yakaonekwa nyaya, ngano, nyaya uye firimu remazuva aya. Ndiye Krisimasi nhau (1843) naCharles Dickens. Mabasa emunyori anoyemurika wechiRungu haafe, asi izvi ndizvo zvinonyanya kuzivikanwa nekuzivikanwa.
Ndiye wekutanga kunyora nezve Kisimusi uye zvinotevera zvakafukidzwa nekufarirwa kukuru kwaishe wake Scrooge. Ndinosarudza aya mamwe matatu yevashanu vari: Chimes, Vanoroya y Kiriketi yekumba. Kana iwe wanga usingavazive, tarisa kunze. Ivo havasi mabhuru ...
Izvo hazvigone kusavapo pamazuva aya uye haimbokundikani. Takazvirangarira kwenguva yakareba sezvatinogona kurangarira. Ndiyo nyaya inonyanya kuzivikanwa yeKisimusi. Isu takazviona mune chiuru shanduro uye kuchinjika kwemifananidzo uye mafirimu. Uye tinozviona zvakare nekuti, zvakapusa, hazvinete. Nyaya yemakaro uye isingafadzi Ebenezer Scrooge, mumwe wake Jacob Marley, mushandi wake Bob Cratchit nemwanakomana wavo mudiki Tim, uye izvo zvipoko zvitatu zvekare, zvazvino neramangwana zvinogara zvichishamisa.
Asi, sekutaura kwatakaita, Dickens akanyora dzimwe nyaya yakatarwa panguva ino yegore. Zvese zvinochengetedza zvakakosha zvinhu zvinozadza basa reDickensian. Saka isu tine kubata kwe fungidziro, mifananidzo uye kushoropodzwa munharaunda, kusetsa kuseka, mufaro wemba pamwe nedanho, iyo inobata yega yega seyakakodzera. Ngatitarise izvi zvitatu.
2 Cricket pachoto
3 Murume akabatwa
Posted in 1844, inozivikanwa zvakare se Mabhero. Uye nyaya yake yakafanana ne Krisimasi nhau.
Trotty, Nickname Toby Veck, murume murombo uye mutana uyo anoita raramo senhume, achiendesa mapakeji chero kupi muLondon. Ha kurasikirwa nekutenda muHumanity, kune zvese zvakaipa uye kusuwa kwainoona kwakatenderedza. Pamakore matsva evha Iwe unenge uine chiitiko chakajairika muchechi bhero shongwe kwaunowanzo shandisa nguva uchimirira kuburitswa. Ikoko Anoshanyirwa nemweya iyo inomubatsira kuti awanezve rutendo irworwo uye ivo vachamuratidza kuti hakuna munhu anozvarwa akaipa, asi kuti mhosva nehurombo ndizvo zvinhu zvinogadzirwa nemunhu.
De 1845. Zviri naka ngano mune iyo kiriketi inoshandurwa kuita inoteedzana fairies. Nyaya yacho inoitika mumazuva matatu uye yakakamurwa kuva nziyo nhatu. Iyo cricket, mucherechedzo werunyararo mudzimba dzakaderera, ndiyo yepakati axis yenyaya. Murwiyo rwekutanga, kiriketi inofara. Mune wechipiri, anonyarara uye wechitatu, anoimba zvakare. Iyo ingangoita nhetembo yeprose nezve hupenyu hwepamba uye rudo rwemhuri, mufananidzo wehupenyu hwevanhuwo zvavo.
Posted in 1848. Uyewo anozivikanwa se Iyo spellbound uye kubata nemweya, Murume akabatwa y Vakabatwa, ingano pfupi. Rinoyeuchidza zvakawanda zve Krisimasi nhau.
Muzvinafundo Redlaw akasurukirwa, kushaya tariro, uye kusava netariro uyo anoda kunyunyuta nezvekukuvadzwa kwavanomuita uye nematambudziko aakasangana nawo. Humwe husiku mweya wakafanana naye unowoneka kwaari uye unopa zano rekuti akanganwe kurwadziwa ikoko, kukuvara uye matambudziko. Mudzidzisi anozeza pakutanga, asi obvumirana. Saka zvinopera ndangariro kubva pane zvakaipisisa zvakapfuura, asi inova inovava zvakanyanya uye nehasha ndisingazive kuti ndodudzira sei. Kushatirwa ikoko kunowedzera kumuranda wake Swidgers, mhuri yeTetterby, uye mudzidzi wavo. Uye munhu wese akatsamwawo saye. Iye oga anoita kunge akadzikama ndiMilly, mukadzi weSwidgers.
Iyo novel inopera ne zvese zvinodzokera pane zvakajairwa uye Redlaw, zvakare saVaScrooge, akachinja kuita murume mutsva, ane moyo munyoro, anonzwira tsitsi.
Dickens akafanana nemabhuku akanakisa. Uye zveKisimusi. Pane zvimwe zvikonzero zvinodiwa zveaya mazuva uye kune chero munhu?
Saka kubva pano Ndinoshuvira vese vaverengi veActualidad Literatura Kisimusi yakanaka kwazvo. Iva nenguva yakanaka nemabhuku akanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Charles Dickens. Dzimwe nyaya dzeKisimusi kunze kwaVa Scrooge
Stylistic zviwanikwa mumabhuku
Mabhuku manomwe atinoverenga muna 7